संघमातहतको डडेल्धुरा अस्पतालको दुरवस्था : ३ दर्जन चिकित्सक दरबन्दी तर ३ जना मात्र कार्यरत – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक २९ गते १०:५७
कति छाती पोलिरहेछ भन्ने त मलाई मात्र थाहा छ
विनाप्रसंग डा. केसीमाथि खनिए खनिया
डा. केसीको घोषित अनशन २५ पुससम्मलाई स्थगित
जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज प्रक्रिया सुरु होस्– डा. केसी
१७औँ अनशनको नवौँ दिन, अर्थात् अनशन स्थगनको दिन प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो उपचारका लागि सरकारद्वारा बाहिरबाट प्रेषित फिजिसियनबाट उपचार गराउन अस्वीकार गरे । डा. केसीको यो निर्णयलाई उनको दम्भका रूपमा मोटो टीप्पणी गर्नेहरू पनि यदाकदा भेटिए, जो डा. केसीको सत्याग्रहको मूल उद्देश्य र अत्यावश्यकताबारे अनभिज्ञ छन् या त बुझ पचाउन चाहन्छन् ।
डडेल्धुरा अस्पताल संघ सरकारमातहतको टर्सेरी अस्पताल हो । संघीयताअघि १० बेडको उपक्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालित यो अस्पताल संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारमातहत गएको थियो । पछि केन्द्र सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका ५ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनेक्रममा यो अस्पताल पनि संघअन्तर्गत आएको थियो । यो मुलुककै दोस्रो पिछडिएको क्षेत्र सुदूरपश्चिमका नागरिकको महत्त्वपूर्ण उपचार केन्द्र हो । दूरदराजका विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्यमा यसै पनि अति सीमित मात्र अवसर प्राप्त छ । त्यसमा पनि पहुँचका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था कुन हदसम्म दुरवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने तथ्य डा. केसीको डडेल्धुराको १७औँ अनशनले उजागर गरेको छ । यो दुरवस्थाको सर्जक अरु कोही नभएर स्वयम् राज्यसत्ता नै हो ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा १८ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । तर, अहिले जम्मा २ जना विशेषज्ञ र १ एमबिबिएस चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । यसका अलावा एकजना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ ६ महिनाका लागि काम गरिरहेका छन् । सरकारले चिकित्सक खटाउँदा पनि अधिकांश अध्ययन बिदामा भएकालाई पठाउँदा फिल्डमा चिकित्सक अभाव भएको अस्पतालका मेसु डा. कँडेल बताउँछन् । ८–१० जना चिकित्सक अध्ययन बिदामै छन् ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा १८ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । तर, अहिले जम्मा २ जना विशेषज्ञ र १ एमबिबिएस चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । यसका अलावा एकजना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ ६ महिनाका लागि काम गरिरहेका छन् । सरकारले चिकित्सक खटाउँदा पनि अधिकांश अध्ययन बिदामा भएकालाई पठाउँदा फिल्डमा चिकित्सक अभाव भएको अस्पतालका मेसु डा. कँडेल बताउँछन् । ८–१० जना चिकित्सक अध्ययन बिदामै छन् । तुलनात्मक रूपमा यस केही विकसित मानिने डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित संघीय टर्सेरी अस्पतालको त यो दुरवस्था छ भने दार्चुलाका नागरिकले कुन स्तरको स्वास्थ्यसेवा पाइरहेका होलान्, त्यसको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । हो, यही अवस्थामा सुधारका लागि नै डा. केसी अवकाशपछि पनि जोखिम मोलेर सत्याग्रह चलाइरहेका छन् ।
दूरदराजका जनसामान्यको समेत स्वास्थ्य र शिक्षामा सुलभ पहुँचका लागि जीवन समर्पित गरेका डा. केसीले डडेल्धुरामा अनशन बसेर औँलामा गन्न सकिने मुलुकका संघीय अस्पतालको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरिदिएका छन् । दुर्गमका अस्पतालमा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक व्यवस्था गरी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देशका लागि नै डा. केसीले सरकारले पठाएका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार गराउन अस्वीकार गरेका हुन् । डडेल्धुरा अस्पतालको दरबन्दी र सेवामा खटिने चिकित्सकको अवस्थाले नै डा. केसीको सत्याग्रहको सार्थकता पुष्टि गर्छ ।
सबै नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा समान तथा सुलभ पहुँचका लागि सञ्चालित सत्याग्रहको मर्म र अत्यावश्यकता अरु कसैले बुझे वा नजरन्दाज गरे पनि यसपटक सुदूरका जनसामान्यले भने आत्मसात् गरेका छन् । सत्याग्रह आफ्नो संवैधानिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि हो भनेर बुझेका सुदूरपश्चिमवासी यसपटक डा. केसीको अभियानमा सामेल भए । सत्याग्रहको मर्मबोध गरेर नै उनीहरूले सत्याग्रहीलाई जबर्जस्ती उठाउन पठाइएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरलाई रित्तै फर्काइदिए । भलै राष्ट्रियताको गहनतम मुद्दा सीमासुरक्षाको विषयले प्राथमिकता पाउँदा यसपटकको सत्याग्रहले केही समयका लागि अर्कै मोड लियो, तर सुपवासीमा यो ९ दिनको बीचमा सत्याग्रहले जागाएको आफ्नो संवैधानिक अधिकारप्रतिको सचेतता कत्ति पनि मोडिएको छैन । यो जागरणले डा. केसीको पवित्र अभियानलाई सार्थक तुल्याउन अवश्य पनि बल पुर्याउनेछ ।
Tags: डडेल्धुरा अस्पताल, डा.गोविन्द केसी